Ndeapi Iwo Akanyanya Kutsvaga Maporofiti kuGermany? Chii chandingaite kuGerman? | Kudzidzira chiGerman, Kudzidza chiGerman
musha » Germany Portal » Ndeapi Iwo Akanyanya Kutsvaga Maporofesa kuGerman? Chii chandingaite kuGerman?
1 Mapaiporofiti anonyanya kudikanwa kuGermany
2 Gumi inonyanya kudiwa mapurofesa kuGermany:
Mapurofesa anonyanya kudikanwa kuGermany
Musika webasa weGerman unopa mikana yakanakisa yevadzidzi vakadzidza-zvakanaka. Kurudziro kune gumi anonyanya kudikanwa mapoka mapoka uye vekunze vanyoreri kuGermany.
Hupfumi hweGerman huri kukura nekukurumidza uye vashandi vane hunyanzvi vanotsvaga kuvhara kushomeka kwevashandi mune mamwe mabasa ekushanda. Muna 2012-2017 chete, vanhu vanoshanda kuGermany vakawedzera ne2,88 miriyoni kusvika pagumi nevanhu zviuru makumi matatu nezvitatu. Chinyorwa chebasa cheGerman.
Gumi inonyanya kudiwa mapurofesa kuGermany:
Software kuvandudza uye programmer
Electronic Injiniya, Electrical Technologist, Electrician
IT chipangamazano, IT muongorori
Mumiriri wevatengi, chipangamazano wevatengi, maneja weakaunti
Chikamu chepakati mukugadzirwa
Nyanzvi Yekutengesa, Mubatsiri Wekutengesa
Mutengesi wekutengesa, maneja wechigadzirwa
Muvaki, mainjiniya ehurumende
Kwayaka: DEKRA Akademie 2018
Iyo Federal Hurumende inoronga kunyora mutemo wekupinda mukati mevashandi vekunze. Mutemo uyu une chinangwa chekufambisa basa revatorwa kune dzimwe nyika kutsvaga basa kuGermany. Nekudaro, kuchine mabasa mazhinji anobhadharwa kwazvo evari kunyatsodzidziswa kunze kwenyika.
Mabhizinesi nemapazi eGermany anopa mikana yemabasa kune vanyori vekunze:
Vanodzidziswa vanochengeta uye paramedics vanogona kuwana mabasa nyore nyore kuGermany. Zvipatara, dzimba dzevakweguru uye dzimwe nzvimbo dzekutarisira dzinoda vashandi vanokwanisa.
Prerequisites: Ivo avo vakadzidziswa kutarisira munyika yekunyorwa vanogona kugamuchira zvakafanana muGerman kune avo vakapedza kudzidza. Iko kune chekutanga kune yavo hutano chimiro uye ruzivo rweGerman; danho remitauro rinodikanwa kuve B2 mune mamwe matunhu uye B1 mune mamwe.
Zvipatara nemaitiro eGermany vane kushomeka kwevanosvika zviuru zvishanu vanachiremba. Kubva muna 5.000, vanhu vakapedza kudzidza kubva kumunda wekurapa kuGerman vanogona kuwana zororo rekurapa kuGermany. Izvi zvinogoneka kune vese vagari veEU uye kune vekurapa vanobva kunyika dzisiri dzeEU. Zvinotarisirwa ndezvekuti diploma yeavo vavhoterwa inozivikanwa seyakaenzana nedzidzo yekuGerman yekurapa.
KUFUNGA IZVI: MaGerman Vanoshandisa kupi Mari yavo? Mararamiro muGerman
Uinjiniya, mota, zvemagetsi, kuvaka, ruzivo rwekuita zvemagetsi uye enjiniya yekufonera ndezvimwe zvezvikanganiso zvikuru muinjiniya.
Mainjiniya vane basa rakanaka uye mari yakanaka munyika maindasitiri eGerman. Iko kudikanwa kunodiwa kwenyanzvi muminda dzakadai semagetsi, kugadzira, michina uye mota. Maitiro e digitization anowedzera kudiwa kunyange mberi.
Prerequisites: Ivo vanoenderana neti diploma yeGerman vanoonekwa se mainjiniya kana eruzivo mainjiniya.
Masvomhu, ruzivo, masainzi esainzi uye hunyanzvi sainzi (MINT)
Vakanyoreswa kunyoresa kubva kuGermany, zvakare vanonzi Mint kuGermany, vanogona kuwana inokwezva mikana yebasa mumakambani akazvimirira uye mumasangano ekutsvagisa sainzi seMass Planck neFraunhofer Society.
Masayendisiti uye vadzidzi
Kune bhodhoro mune sainzi (masvomhu, ruzivo, masayenzi echisikirwo uye tekinoroji). Kune zvinzvimbo zvinokwezva zvevasayendisiti muminda iyi, zvese mumasangano akazvimirira uye mumasangano anotsvaga veruzhinji akadai seMax Planck Society neFraunhofer Society.
Prerequisites: Vaya vane dhigirii musainzi vanogona kunyorera kune yeYunivhesiti Dzefundo Center (ZAB) kuve nechokwadi chekufanana pakati pekupedza kuyunivhesiti uye chikoro cheGerman.
Akakodzera matavi ebasa
Vashandi vanokodzera vane ruzivo rwekudzidzisa vane mukana wekuwana basa kuGermany. Maitiro ekuti azadzwe nevari kukwikwidza kubva kunze kweEuropean Union nyika anotevera:
Kuti kune kushomeka kwevashandi mumhizha,
Vanyori vakagamuchira zvirevo kubva kune rimwe sangano,
Dzidzo yavo inoenderana nemaitiro eGerman ekudzidzira maitiro mune iyo shamba.
Nhasi, kunyanya mumisha inochengeterwa vakwegura uye zvipatara, kudiwa kwevashandi mumunda wekutarisira varwere kwakakura.
TAGS: inonyanya kudiwa mapurofesa mu germany, basa mu germany, chii chandingaite mu germany
Ynt: Ehliyet ve probeseit